Arakan Online Magazine: အလွန်လှပသော ရခိုင်နာမည်များ
အိမ်နားပါးချင်း အချေခါအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်တေ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟိပါရေ။ ရန်ဖြစ်ရေဆိုစွာမှာ သူရို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်သည်ကိုမဆိုလိုပါ။ အကျွန်ုပ်နှင့်ရန်ဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်။ အကြီးသူက (လှမေကြီး) (Hla May Gree)၊ အငယ်သူက (လှဘုမ) (Hla Bu Ma). တအိမ်ကျော်မှာ ရခိုင်မုန့်တီရောင်းရေ အရီးတယောက်ဟိပါရေ။ (အိမ်စိုးဖြူ) (Ein Zo Pru)၊ ၀ချေတန်းကပင် ကျောင်းနီဖက်သူငယ်ချင်းတယောက် (မကြိုင်ဖြူ) (Ma Krai Pru) ပဇောင်လှရေ နာမည်ချေတိပါလဲ။
သီကျလားကတ်တေ သူငယ်ချင်းနာမည်တိကိုလည်းပြောပါမည်။ (သန္တာအေး) (Thanda Aye)၊ အောင်မင်းကျော် (Aung Munn Gyaw)၊ နုအောင်ကျော် (Nu Aung Gyaw)၊ ရွှေခိုင်လင်း (Shoay Khine Lunn)၊ ဦးဥာဏ်ထွန်း (Oo Nyan Twann). အားလုံးသီကျလားခကတ်ပါယာ။ ပဇောင်လှရေ နာမည်ချေတိပါလဲဂု။
ထူးခြားရေ နာမည်ချေတခုဟိပါရေ။ (ဦးသန်းတင်)၊ (တင်) ကတော့ခါ မြန်မာလွှမ်းမိုးခြင်းခံရရေ ရခိုင်နာမည်ပါ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်လို့ နာမည်ခေါ်ခါ ဆရာတိက (ဦးသန်းတင်) ဆိုကေ အသက်ကြီးကြီး ၀ါကြီးလို့ထင်ရေ။ နာမည်ထူးခါ ဂျောင်ချေမှာကုတ်ပျာ ပိန်ပိန်ညှောင်ညှောင် မမချေ။ ကောင်းကောင်းရယ်ရပါရေ။ ၀မ်းကွဲအစ်မတယောက်ဟိပါရေ။ (ဦးမြသိန်း)၊ (Oo Mra Thein)၊ ၀မ်းကွဲ အစ်ကိုတယောက် ညီတယောက်ဟိပါရေ၊ (ဦးဝင်းမောင်) (Oo Wunn Maung) (ဦးထွန်းဝင်း) (Oo Twan Wunn)။ ဆွီမျိုးဖြစ်လို့ ပြောစွာတော့မဟုတ်ပါ။ ပဇောင်လှရေ နာမည်ချေတိပါလဲဂု။
ဘင်္ဂလားကိုရောက်ခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းမှာ ကောင်းကောင်းလှရေ ရခိုင်သမနာမည်ချေတခုကို လားတွိခီပါရေ။ (အလှသျှင်မေ) (Ahla Shun May). တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် (AMP) မှာ ယင်းနာမည်နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူရေ မမချေတယေက်လားတွိခီပါရေ။ (စောသျှင်မေ)။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းခါ (Saw Shin May) ဆိုပျာ အလယ်နာမည်မှာ မြန်မာပိုင်ယှောင်ဖြစ်နီလို့ မုန်းကေလည်းမုန်းပါတ်စီ၊ ကောင်းစီချင်ကေတော့ အမုန်းခံရဖို့နန်းရာဆိုပျာ (မချေ မချေနာမည် ကကောင်းလှရေ၊ ရခိုင်နာမည်ပေါက်ပေါက်၊ သို့သော် အလယ်မှာ မြန်မာနာမည်ဖြစ်နီရေ) အကြံပြုဖြစ်ပါရေ။ မချေက မာန်မပါပါ။ သဘောထားကြီးမြတ်စွာဖြင့် ပြန်ပျင်လိုက်တေအတွက် သူ့နာမည်ရေ (စောသျှင်မေ) (Saw Shun May) ဆိုပျာ ရခိုင်ဟန် ရခိုင့်အသံစစ်စစ်ဖြင့် ကကောင်းလှလားပါရေ။ (AMP) မှာ နာမည်အလှဆုံး ရခိုင်သမ (လှယိုင်ကျေးမယ်ပြိုင်ပွဲ) လုပ်ကေ သူ့နာမည်ကို အယင်ဆုံး (တစ်) ပီးပါဖို့။ ပြီးကေ (နုလှသန္တာ) ပါ။ ကကောင်းလှရေ နာမည်ချေပါ။ ပြီးကေ (ပန်းနုဇံ)၊ ပန်းနုဇံက နာမည်ချေလည်းလှရေပိုင် ကဗျာအရွီးအသားလည်း ကောင်းကောင်းပြောင်မြောက်ပါရေ။ ကျန်ရေ နာမည်လှရေ ရခိုင်သမတိ (AMP) မှာ အများကြီးဟိပါသိမ့်ရေ။ (ခိုင်ဝေဇံ)။ မှတ်မိသလောက်ရာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါရေ။ ကျန်ရေလူတိကို နာမည်မလှလို့ပြောစွာမဟုတ်ပါ။
ထိုင်းက ရခိုင်သမချေ ဘလော့ခ်တခုမှာ ကောင်းကောင်းလှရေ ရခိုင်သမချေတယောက်နာမည်ကို လားတွိခီပါရေ။ (ရိုးလှသန္တာ)၊ ပဇောင်လှရေ နာမည်ပါလဲဂု။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ပိုင်နာမည်ပေါင်းခါ (Ro Hla Thanda) မဟုတ်ဘဲ (Yo Hla Thanda) ဖြစ်နီလို့ ကကောင်းအရုပ်ဆိုးလားပါရေ။ ပြောတော့ပြောဖြစ်ပါရေ။ ရလီလား မရလီလားမသိ။ နဂိုရ်အတိုင်း First Name မှာ မြန်မာနာမည်နှင့် ဟိလီပါယင့်။
နောက်တခုပြောချင်စွာက ရခိုင်သားနာမည်မှာ (ဦး) (ဒေါ်) တပ်တေကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်ရို့ရခိုင်မှာ နာမည် (မောင်ဘသိန်း) ဆိုကေ အသက်ဇာလောက်ပင်ကြီးလီ (မောင်ဘသိန်း) လို့ရာခေါ်ပါရေ။ အသက်ကိုလိုက်ပြီးကေ (ဦးဘသိန်း) ပြောင်းမလားပါ။ (ဆရာမောင်ဘသိန်း၊ အခင်မောင်ဘသိန်း) လို့ရာခေါ်ပါရေ။ (ဆရာဦးဘသိန်း) ဆိုပျာ ပြောင်းမခေါ်ပါ။ နာမည်ရှိမှာ (ဦး) (ဒေါ်) တပ်စွာရေ ရခိုင်မှာ ထုံးစိုင်ဟိရေလား။ မီးခွန်းဖြစ်လာပါရေ။ စာစောင်ပီစောင်တိမှာလည်း တခုမှာလည်းမတွိဖူးပါ။ ယင်းပြဿနာကို အဖြေရှာမရဖြစ်နီဆိုက် ကံနှင့်ကံ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ရခိုင်လမားဘုန်းကြီးကျောင်း မျက်နှာကြက်မှာ (မိအောင်ကြွဇံ၊ ဘသာတိုးအောင်) ကောင်းမှုဆိုပျာ လားတွိခီပါရေ။ အော် ရခိုင်မှာ (ဦး) (ဒေါ်) အစား (မိ) (ဘ) ဆိုရေ ရတနာကို အထွဋ်တင်သုံးရေမနားဂုလည်း သဘောပေါက်မိပါရေ။ သိရေလူလည်းဟိပိုင် မသိရေလူလည်းဟိပါဖို့။ အတွက်မရရေလူလည်းဟိပါဖို့။
နောက်ထပ်နာမည်လှရေ ရခိုင်သမချေနှစ်ယောက်တွိပါသိမ့်ရေ။ (နန်းဦးကြိုင်)(Nann Oo Krai) နှင့် (မြအိမ်ဇံ) (Mra Ein Zan) ဖြစ်ပါရေ။ (နန်းဦးကြိုင်) ကို အေနိမှ AMP မှာ တွိစွာပါ။ (မြအိမ်ဇံ) ကိုက တွိဖူးမြင်ဖူးစွာကြာပါပျာ။ အေ Blog Post စရွီးရေနိက အတွက်မရလို့ မဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရေ။ ခေတ်ဆန်ဆန်ချေနှင့် အခြားနာမည်လှရေ မမချေတိလည်းဟိပါသိမ့်ရေ။ သူရို့နာမည်ကို နောက်မှ ဖော်ပြပီးပါမည်။
နောက်လှရေနာမည်တခုက (သဇင်ဖြူ) ပါ။ သူက အင်္ဂလိပ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းခါ (Thazon Phru) လို့ပေါင်းပါရေ။ အကျွန်ုပ်က (Thazun Phru) လို့စာလုံးပေါင်းစွာ ပိုသဘောကျပါရေ။ ဇာဖြစ်လို့လဲဆိုကေ (Thazon) လို့စာလုံးပေါင်းခါ (ပါးစကို ပိတ်ရလို့ပါ။) (Thazun) ဆိုကေ (ပါးစကိုပိတ်နီစရာမလိုပါ။ အကျွန်ုပ်ရို့ပြောရေပုံစံအတိုင်းထက်စိကျပါရေ။) သဇင်ဖြူ (Thazun Phru) ရွီးရေကပျာချေတိကကောင်းကောင်းပါရေ။ (နဲ့) ဆိုရေ မြန်မာတလုံးဖျက်နီစွာပါ။ ပိုကောင်းစီချင်လို့ လက်ခုပ်အားရပါးရတီးပစ်ချင်လို့ (နန့်) နှင့်အစားထိုးသင့်ကြောင်း အဆိုပြုလီပါရေ။ (ချစ်) နှင့် (ရှစ်) ကို ရခိုင်မှာ အသံအတူတူထွက်လို့ (နဲ့) ကို (နန့်) လို့ပြောင်းကေ (ချစ်) ကို (ရှစ်) လို့ပြောင်းရဖို့ဆိုပျာ မဆီမဆိုင် အကြောင်းပြလာပါရေ။ ရခိုင်မှာ (ချ) နှင့် (ရှ) အသံထွက်မတူစွာကို (ဆံတော်ရှင်) (Rhun) ဘုရားနှင့် ဥပမာပီးလီပါရေ။ မြန်မာမှာလည်း (ကြည့်) နှင့် (ကျိ) ကို မကွဲပါ။ ရခိုင်မှာ ကွဲပါရေ။ အသံထွက်တူကေလည်း အဓိပ္ပါယ်မတူရအောင် စာမှာခွဲခြား၍ ရွီးရပါသည်။ သို့သော် ယင်းဥပမာကိုတော့ မပီးဖြစ်လီပါ။ ကိုယ့်အဆိုကိုလက်မခံလို့ သူ့နာမည်ကို မလှဆိုလို့ကားမဖြစ်။ နာမည်လှကေတော့ လှရေလို့ ပြောရပါဖို့။ သူနှင့်တူရေ နာမည်ချေတလုံးက (သဇင်ခိုင်) (Thazun Khine) ပါ။ ယင်းနာမည်ချေလည်း လှပါရေ။
အခြားလှရေနာမည်တိက (အစောချေ) (Ah Saw Chay)၊ (အေးချေ) (Aye Chay)၊ (ပန်းသဇင်) (Pan Thazun) စောမြဇံ (Saw Mra Zan) ပါ။ စောမြဇံကဗျာ “ရောင်နီကိုတမ်းတခြင်း” လည်း ကကောင်းကောင်းပါရေ။ နောက်ခေတ်လည်းဆန်ရေ၊ ရခိုင်ဘောင်အတွင်းကလည်း မလွတ်လို့ပြောလို့ရရေနာမည်တိက (စံမိုးသူ) (San Mo Thu), (နုနုအေးသူ) (Nu Nu Aye Thu), (မျိုးမြတ်သူ) (Myo Mrat Thu) ရို့ဖြစ်ပါရေ။ အဓိကတော့ ခေတ်ဆန်ကေလည်းဆန် ရခိုင်ဘောင်အတွင်းက မလွတ်ဖို့အရေးကြီးပါရေ။ ဘောင်ကျော်မလားမသင့်ပါ။ (နန်းဦးကြိုင်) (Nann Oo Krai) နာမည်က ခေတ်လည်းဆန်ရေပိုင် ရခိုင်ဟန်၊ ရခိုင်စတိုင် ပစ်ပစ်နစ်နစ်လည်းကျပါရေ။ ခေတ်ဆန်ချင်ရေလူတိအတွက် (နန်းဦးကြိုင်) (Nann Oo Krai) ကို စံနမူနာယူစီချင်ပါသည်။ ရခိုင်ပေါက်ပေါက်နာမည်နှင့်လည်း ခေတ်ဆန်အောင်၊ ခေတ်မှီအောင်၊ (ခေတ်ထက်သာလွန်အောင်လုပ်နိုင်၏) ဆိုရေ သက်သီသာဓကပါ။ (နန်းဦးကြိုင်) (Nann Oo Krai) နာမည်ရေ ခေတ်မှီရေတောင်မက (ခေတ်ထက်သာလွန်ပါသည်)။ အေနာမည်ချေနှင့်ရာ ၀တ္တုတပုဒ်ရွီးကြည့်ပါ။ မြန်မာစာပီလောကမှာ ဟိုးဟိုးကျော်လားဖို့စွာ သေချာပါသည်။ မြှောက်ပီးစွာမဟုတ်ပါ။ အေနာမည်မျိုးကို အကျွန်ုပ်တခါလည်း မစိုင်းစားမိဖူးပါ။ နာမည်ကိုမြင်မှ အံ့အားသင့်ရပါသည်။ သူ့ကိုယ်သူ ပီးရေနာမည်လား။ သူ့အမိအဖက ပီးရေနာမည်လား။ အကယ်၍ သူ့အမိအဖက ပီးရေနာမည်ဆိုကေ သူ့အမိအဖကို ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ရပါဖို့။ အကယ်၍ သူ့ကိုယ်သူပီးရေနာမည်ဆိုကေ သူ့ကို ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ရပါဖို့။
နောက်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သရုပ်ပျက်နာမည်တိကို ဝေဖန်ပါမည်။ ယင်းနာမည်တိက (ရခိုင်သားတိုင်းကြည့်သင့်ရေ) ဆိုရေ ကိုအေးမောင်တင်ပီးလိုက်ရေ Video ထဲက ရခိုင်သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ရခိုင်အ၀တ်အစားနှင့် ရခိုင်အက,ကနီကတ်တေ ရခိုင်သမချေတိနာမည်ပါ။ နာမည်တိကို ဗီဒီယိုမှာလည်း မြင်နိုင်ပါသည်။ မည်သည်လောက် အနီအထားဆိုးဝါးနီရေလဲ ခန့်မှန်းလို့ရပါသည်။ (နန္ဒာထွေး၊ ခင်သက်သက်စံ၊ ဒီချိုလွင်) ဟုခေါ်သည်။ ရခိုင့်ယိုင်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ်နီသူများက ဤသို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နီသည်ဆိုလျှင်မူကား ရခိုင်ညွန့်ဖူးများ၏အနာဂါတ်မှာ မတွေးဝံ့စရာဖြစ်ပါသည်။ ချစ်ဖို့ကောင်းရေ အေရခိုင်သမချေတိမှာ အပြစ်မဟိပါ။ မြန်မာနာမည်ကိုမှ ကိုယ့်သားသမီးတိနဖူးထက်မှာ တံဆိပ်ကပ်ဝံ့ရေ (ဟာရီ) အမိအဖတိမှာ ကောင်းကောင်းတာဝန်ဟိပါသည်။ တနိတရက် ကိုယ်လည်းအမိအဖနီရာ ရောက်လာရေခါ အေပိုင် (ဟာရီ) အမိအဖတိမဖြစ်ကတ်စီဖို့ သတိထားဆင်ခြင်ကတ်ဖို့ စေတနာဖြင့်ဆော်သြလိုက်ရပါသည်။ ဝေဖန်သည်မှာ လွန်ကျွံ့မှုဟိသည်ဆိုပါက Comment Box ကဆင့် တန်ပြန်ဝေဖန်နိုင်ပါသည်။ အေပိုင်လက်ဆင့်ကမ်းအမွီမျိုးက ရခိုင်သားတိစုန်းစုန်းမြုတ်ဖို့ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
နောက်ချစ်ဖို့ကောင်းရေ နာမည်ချေတခုက (လုံးလုံး) (Lone Lone)။ မိကျန်လိုက်တေ နာမည်ချေတခုက (စောသဇင်ခိုင်) (Saw Thazun Khine) ဖြစ်ပါရေ။ (ခိုင်ချေ) (Khine Chay) နာမည်လည်း လှပါရေ။ (ခိုင်ခိုင်ချေ) (Khine Khine Chay) ဆိုကေ ပိုလို့လှပါဖို့။
ခေတ်ဆန်ပြီးကေ ရခိုင်ဘောင်လည်းမကျော်လို့ပြောလို့ရရေ နောက်တယောက်က (မြနန်းနွယ်) (Mra Nan Nwe) ပါ။ အေနာမည်ချေက လှလည်းလှရေ ခေတ်လည်းဆန်ပါရေ။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်နာမည်ပီးလို့တောင်ရပါရေ။ ပြဿနာက (မြ) ကို စာလုံးပေါင်းခါ (Mra) လို့ ကိုယ့်ရခိုင်သံနှင့်မပေါင်းဘဲ (Mya) ဆိုပျာ မြန်မာအသံနှင့် စာလုံးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါရေ။ အထက်မှာပြောခရေပိုင် (ရိုးလှသန္တာ) ကို အင်္ဂလိပ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းခါ (Ro Hla Thanda) လို့မပေါင်းဘဲ (Yo Hla Thanda) လို့ပေါင်းလိုက်တေအတွက် ယလောက်လှရေ (ပန်းသန္တာ) နာမည်ရေ (ဇီးယိုထုပ်) ဖြစ်လားရပါရေ။ ထိုနည်းလည်းကောင်း (Mra) ကို (Mya) လို့ စာလုံးပေါင်းလိုက်သောအခါ (မြ) ၏တန်ဘိုးမှာ ယုဂ်ဆင်းလားပါသည်။ နောက် လှလည်းလှ ခေတ်ဆန်ပြီးကေ ဘောင်မကျော်လို့ပြောလို့ရရေနာမည်ချေက (စောနှင်းဇီခိုင်) (Saw Nhunze Khine) ဖြစ်ပါရေ။ (ဖြိုးချေ)(Phro Chay) နာမည်လည်း မဆိုးပါ။ အထူးအဆန်းချေဖြစ်ပါရေ။
စင်္ကာပူမှ မမသန်းရွှေ Comments မှာ ရွီးပို့လိုက်သော လှပသော ရခိုင်နာမည်များအထဲက (စောယိုင်ဖြူ) (Saw Yai Pru) နှင့် (သျှင်ထွီးမေ) (Shun Htwee May)၊ (နှင်းအေးခိုင်) (Nhun Aye Khine) နာမည်များက ပိုလှသည်ဟု ယူဆရ၍ လည်းကောင်းနာမည်များကို ရွီးချယ်လိုက်ပါသည်။ (စောယိုင်ဖြူ) ဆိုသောနာမည်ကိုမြင်မှ အကျွန်ုပ်ရို့မြို့က အစ်မကြီး (ဧယိုင်ဖြူ) ကို သတိရပါသည်။ သူ့နာမည်ကို သတိရခြင်းအကြောင်းက တိုက်ဆိုက်မှုဟိ၍ဖြစ်သည်။ အစ်မ (ဧယိုင်ဖြူ) သည် (မဆလ) ခေတ်မှာ အလွန်တက်ကြွသော အဓိကအမာခံဒေါက်တိုင်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်မမျှ အရည်အခြင်းဟိသည်။ အပျိုကြီးပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုက အစ်မသူက မဆလအမာခံဒေါက်တိုင်လုပ်နီချိန်တွင် သူ့မောင်အရင်းက ပြောက်ကျားခေါင်းဆောင်ဥက္ကဌဖြစ်နီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုသီကျလားပါယာ။ သီမှ ကောင်းကောင်းချီးမွှမ်းကတ်ပါရေ။ အစ်မ (ဧယိုင်ဖြူ) သတင်းကိုတော့ တခုလည်းမကြားသိရပါ။ (ဧယိုင်ဖြူ) နာမည်သည်လည်း ကောင်းကောင်းလှပသော ရခိုင်နာမတခုဖြစ်သောကြောင့် ဤနီရာတွင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
နောက်ထူးခြားသောနာမည်တခုမှာ အကျွန်ုပ်ရို့အိမ်ရှိ အဘောင်မ (သြဇာဖြူ) ဖြစ်ပါသည်။ (သြဇာဖြူ) ဆိုသောနာမည်မှာ အလွန်ထူးခြားသော ရခိုင်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနာမည်မျိုးကို ယခုအခါ မကြားဖူးပါယာ။
ဤဆောင်းပါးရွီးနီစိုင်တွင် (အေး) သည်ရခိုင်နာမည်လား၊ မြန်မာနာမည်လားဟူသည့်မီးခွန်းတက်လာပါသည်။ (အေး) အစား (အီး) ကိုအစားထိုးသင့်သည်ဟုဆိုသည်။ ပဇာကြောင့်ဆိုသော် (အေး) ဟူသော မြန်မာစကားကို ရခိုင်တွင် (အီး) ဟူ၍ သုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမှန်မှာ ရခိုင် (အေး) ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ မြန်မာကဲ့သို့ (အေး) ချမ်းသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်မရဘဲ (သာယာသည်၊ နာသာသည်) ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ယခု အကျွန်ုပ်ရို့သုံးနီသော (အေး) ကို ရှိလူကြီးများက (ဧ) ဟု စာလုံးပေါင်းသည်ကို တွိရပါသည်။ (တေးခြင်းဆိုသည် သာခြင်းဆိုသည်) ကို ယခုထိ အနောက်ဘင်္ဂလား၊ ဘိုမင်းထောင်၊ ဖလံထောင်၊ ထရိပူရ ရခိုင်သားများက (ဧ) ဆိုသည်ဟု ပြောဆိုလျှက်ပင်ဟိပါသည်။ တစုံတယောက်သောသူက သာခြင်းဆို၊ တေးခြင်းဆိုတတ်လျှင် “အေသူချေ ကောင်းကောင်း (ဧ) ဆိုတတ်တေ” ဟူ၍ ပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်နာမည်များ၌တွိရသော (အေး) ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ (သာယာသော၊ နာပျော်စရာကောင်းသော၊ နားဝင်ချိုစီသော) ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
နောက်မိကျန်ခရေနာမည်ချေတိ တွိသိမ့်ရေဆိုကေ ပြန်လည်ဖော်ပြပီးပါမည်။
ကျမ္မာချမ်းသာကတ်ပါစီ။ ဖီးဘယာဝီးကွာလို့ လုပ်တိုင်းအောင် ကြံတိုင်းမြောက်နိုင်ကတ်ပါစီ။
Posted by thahlaoo at 10:24 PM
ခိုင်မြသိန်း September 20, 2009 at 4:25 AM
ကောင်းကောင်း ကောင်းရေဖေါ်ပြချက်တပါ။ သတိထားဗျာ စာရွီးထားစွာကောင်းရေ။
Unknown January 8, 2010 at 11:30 AM
အလှဆုံးနာမေက သာလှဦး ဖြစ်ပါရေ...:)
အလှပလှ ဘဝင်ကျလားပါယာ။ ရခိုင်နာမည်တိ ဖော်ပြနိုင်စွာ၊ ခိုင်-ဂလိစ်မာ ရခိုင်နာမည်ပေါက်ပေါက်ဖြစ်အောင် တည့်မတ်ပီးစွာ၊ အေးနန့် အီးကို တည့်မတ်ပီးစွာ ကကောင်းသဘောကျပါရေ။ ခိုင်-ဂလိစ်အပိုင်းကို အကျွန်ရို့ ဖေ့ဘို့ခ်ထက်မာ မြင်ကေ ထောက်တေလို့ ပြောရလောက်အောင် ထောက်နီပါရေ။ အစ်ကိုလေ့ တွိမြင်ပြီးဖြစ်ပါလိမေ။ အကျွန်ရို့ထောက်စွာတိမာ အမြင်မတော်စွာတိ ဟိကောင်းဟိနိုင်ပါရေ။ အစ်ကိုအနီနန့် ညီချေရို့ဧ့ မပြည့်စုံမှုကို မျက်စိနှိတ်ပမာ မျက်ကွယ်မပြုပါကေ့။ တစ်ယောက်နန့် တစ်ယောက်တိုင်ပင်တိုင်ပင် နှီးနှောခွင့်တိ လိုချင်ပါရေ။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရဖို့စွာတိ ဟိပါရေ။
ဒေပို့စ်မာ တွိရေ သတ်ပုံတချို့ကို တိုင်ပင်ပါမေ။ အစားထိုး တက်စား တက်စား-အရီးကို တက်စားထိုးကေ ပိုလို့ ရခိုင်ဆန်ဖို့ မြင်ပါရေ။ ဖြစ်နိုင်ပါရေလား။ စကားပြောဟန်နန့် စကားပြင်ဟန်နှစ်မျိုးရောထွီးပနာ ရီးထားစွာကို တွိပါရေ။ ဥပမာ .....................ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟိပါ(ရေ)။ ....................ရန်ဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုပါ(သည်)။ ဖြူ( Pru)ကိုလေ့ တိုင်ပင်လိုပါရေ။ အင်္ဂလိပ်ရို့ထုတ်တေ သံရင်းမာ P-ကို ဖီ လို့ အသံထုတ်ပါရေ။ ယင်းချင့်က တစ်ပိုင်းပါ။ အကျွန်ရို့ ရခိုင်မာကျခါ ဗမာယူဆချက်ကို ယူပနာ ပီ-လို့ရာ အသုံထုတ်ကတ်တေ မဟုတ်ပါလာ။ ယင်းပိုင်ဆိုပါကေ ဖြူ-ကို Fru ရီးလို့ ရနိုင်ပါဖို့လား။ အခြားခြားနန့် တခြားလေ့ ရခိုင်ရို့ဧ့ စာပီအယူအဆမာ မတူနိုင် ထင်ပါရေ။ ရွီးနန့် ရီးကိုလေ့ ပြန်ပနာ စီးစစ်ဖို့ လိုပါလိမေ။ သူတစ်ပါးကို နဲ့-အရီးတက်စား နန့်-ကို ရီးဖို့ အကြံပြုထားပါကေလေ့ ကိုသာလှဦးမာ နှင့်-ကို သုံးနှုန်းထားပါရေ။ ဘာသာဗေဒဆရာရို့ အများစုကြိုက်တေ မာ ကို မသုံးပါဘဲ မှာ-ကို ရီးသားပါရေ။ ယှင်းပြမှုချေ ဖတ်ခွင့်ရချင်ပါရေ။ မြုတ်-မာလေ့ တ-သတ်ကို ရီးသားပါရေ။ ဆန်းသစ်လိုရေ အကြောင်းပြချက်ချေ မြင်ခွင့်ရလိုက်ချင်ပါရေ။ စင်ကာပူ-အရီးကိုလေ့ ပြန်စီးစစ်ဖို့ လိုပါရေဟမ်။
thahlaoo May 12, 2013 at 6:37 PM
(တက်စားထိုး) ဆိုရေ စကားလုံးက ကောင်းကောင်းသင့်တော်ပါရေ။